Baro isticmaalka 3D Photoshop qalabkiisa | Abuurista khadka tooska ah
Baro sida loo isticmaalo qalabka 3D ee Photoshop
Ma ogtahay inaad abuuri karto Walxaha 3d oo leh qalab naqshadeynta garaafka ah? Iyadoo la adeegsanayo Photoshop, waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh u qabato yaabab, si fudud oo aanad aqoon sare u lahayn aaladda.
Waxaan ku siinaynaa kiis wax ku ool ah si aad u fahamto isticmaalka aasaasiga ah ee aaladda iyo dhammaan fursadaha ay leedahay. Kiiskan, waxaan ku abuuri doonnaa kubad adduun daqiiqado gudahood.
1 Hayso sheyga
2 Mesh mari
3 Shayga 3D
4 Guryaha khariidadeena 3D
Qalabka waxa aan u baahan doono ayaa noqon doona sawirXaaladdan oo kale, khariidadda adduunka ee qaabka png, taas oo ah, iyada oo aan lahayn asal. Marka aan helno feylka waan fureynaa oo waxaan dooran doonaa lakabyadaada. Habka ugu dhaqsaha badan ayaa loo maraa aaladda "xulashada degdegga ah". Nooca cusub ee barnaamijka wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku doorano lakabkiisa qaab fudud oo qumman oo leh badhanka ka muuqda dusha menu-ka: Xullo oo mari maaskaro.
Tallaabada xigta ee la raacayo, iyadoo feyl la xushay ay noqon doonto abuuro mesh, taasi waa, saamaynta 3D. Waa inaan raacno wadada xigta, sida aan ku muujinno sawirka:
Mesh cusub oo ka socda Lakabka - Mesh Preset - Sphere.
Saamaynta a kubada adduunka si otomaatig ah.
Markaad abuureyso shayga 3D, daaqad ayaa soo muuqan doonta taas oo aan ku go'aansan karno taas aragti waxaan dooneynaa inaan wax ka aragno Intaa waxaa dheer, jiirka waxaan awoodnaa wareeji shayga oo aan ku aragno dhammaan wajiyadooda booska aan rabno.
Guryaha khariidadeena 3D
Si loo siiyo dhammeystir shakhsiyeed, waan beddeli karnaa guryaha lakabka. Tusaale ahaan, go'aaminta midabka asalka ee wareega. Sida aan ku muujineyno sawirka, waa suurtagal mari midabka aad rabto iyada oo xulashada midabka ee ka muuqata menu-ka dhinaca.
Intaas waxaa sii dheer, waa inaan maanka ku hayno in, haddii aan dooneyno inaan ku dabaqno sheygan asalka asalka ah ee aan fidsaneyn, tusaale ahaan, aan ku abuureyno jees jees sida uu qol uga muuqanayo, waa inaan tixgelin siino bartilmaameedka. Waxay kuxirantahay tan hooska wareega waa in lagu dhajiyaa dhinac ama dhinac kale. Xaaladdan waxaan ku darnay sagxad fidsan.
Sida aad awooday inaad u fiirsato, waa wax fudud fudud in la sameeyo iyo natiijada waa mid xirfad leh iyo aad u waxtar leh mashaariic garaafyo kala duwan.
Abuur shaygaaga 3D laba daqiiqo gudahood!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Baro sida loo isticmaalo qalabka 3D ee Photoshop
Tifatiraha sawirka Aperture ee Apple wuu dhiman doonaa
Ku hagaaji naqshadeynta qoraaladaada iyo degitaanadaada WordPress adigoo adeegsanaya Shorcodes Ultimate